Hogaamiyaha DG Puntland Cabdulaahi Saciid Deni oo kaqeyb galay dooda doorashada looga hadlayo Soomaaliya ayaa sheegay in 30% qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka Federaalka.
Deni ayaa sheegtay in qoondada uusan ku qorneyn dastuurka dalka laakiin loo gartey haweenka in la siiyo 30% kuraasta baarlamaanka Soomaaliya si ay ugu soo muqdaan siyaasada.
Wuxuu sheegay in haweenka aysan ku xumeyn siyaasada, isagoo tusaale u soo qaatay qaar kamid ah oo xilal sare ka soo qabtay hay’ado kala duwan, ugu dambeyntiina wuxuu ugu baaqay inay joojiyaan hadalada xanafta leh ee ay ku raadinayan kuraasta ay ku haminayaan in ay ka helaan baarlamaanka Hadaba sidaas waa “Wax aan la aqbali karin”.
“Haweenka waxay u baahan yihiin inay jilciyaan mowqifkooda adag, maadaama ay na sugeyso inaan si wada jir ah u wajahno xaalada siyaasadeed. Go’aanka qoondada haweenka ee September 17, 2020 dib looma celin doono lamana diidi doono kuraasta.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Deni.
Isaga oo hadalka sii wata ayuu yidhi “Haweenka qoondada loo xiray ma ahan dastuur qoran, laakiin waxaa loo gartey in la siiyo, dadka halkaan jooga ma dhaliilsana, qofka aflagaadeyaa dhaqankisa waa isagu is aflagaadeyey naftiisa, waan mid ceeb ah, waddamada qaar oo ilbaxnimada noga horeyey ayaan siin qondo dumarka, taasi waxaay ku xiraan tahay dhaqan ay haystan”.
Haweenku waxay xusul duub ugu jiraan helista kuraasta Baarlamaanka Soomaaliya si ay u helaan ugu yaraan 24% muddada afarta sano ah ee ay ku shaqeynayeen sharci dejinta, taasoo ku eg 28-ka Diseembar, 2020.
HORDHAC: West Bromwich vs Arsenal – Gunners Oo